Suunka Wareejinta Qalabka Fudud
Maro qashin ah
Barkinta Silicone Rubber
Ka dib markii ay sii joogaan warshadaha silikooniga muddo dheer, macaamiil badan ayaa maqli doona su'aashan: alaabada silikoon ee leh cabbir isku mid ah ama xitaa qaab isku mid ah waxay leeyihiin qiime kala duwan.
Ka dib markii ay sii joogaan warshadaha silikooniga muddo dheer, macaamiil badan ayaa maqli doona su'aashan: alaabada silikoon ee leh cabbir isku mid ah ama xitaa qaab isku mid ah waxay leeyihiin qiime kala duwan. Mawduucan, waxaa jiri jiray inaan xoogaa ciriiri jiray. Si loo xaliyo dhibaatadan, marka lagu daro learnin ...
Hababka daaweynta goobta ee leexashada suunka gudbinta
1. Marka loo eego cabirka baaxadda gaadiidka, waxay u qaybsan tahay: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Moodooyinka inta badan la isticmaalo sida B1400 (B waxay u taagan tahay ballac ahaan, millimitir). Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax soo saar ee ugu weyn ee shirkaddu waa B2200mm belt belt. 2. Marka loo eego u ...
Sababta suunka u jabay
1. Sababta jabtay suunka (1) Xiisada suunka gudbiyaha kuma filna (2) Suunka rarka waxaa la isticmaali jiray waqti dheeri ah oo si daran ayuu gabow u yahay (3) Maaddooyin waaweyn ama bir ah ayaa burburinaysa suunka xamuulka ama macaanka. (4) Tayada isku-xiraha suunka gudbiyaha ma buuxinayo ...
Cinwaanka: Gate1509, C4, No. 298 Fangcheng Road, Degmada Xinwu, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Wuxi, Jiangsu, Shiinaha